Home News War Deg Deg ah:-Wasiir hada iscasilay (Ogoow sababta)
Wasiirkii Arimaha gudaha iyo dowladdaha hoose ee Maamulka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Tima Cadde oo goordhaw Warbaahinta kula hadlay magaalada Garawe ayaa shaaciyay in uu iska casilay xilkii Wasiirnimo uu hayay.
Cabdullaahi Cali Xirsi ayaa is casilaadiisa ku sheegay in ay ku timid sababo isaga u gaar ah, waxa uuna xusay Wasiirka in warqada is casilaadiisa uu u gudbiyay Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas.
Warar soo baxaya oo ay heshay Shabakada Allbanaadir ayaa sheegaya in sababaha uu Wasiirkii arimaha gudaha Puntland isku casilay in ay tahay in uu doonayo in uu u tartamo xilka Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland.
Bisha Janaayo ee sanadka cusub ayaa la filayaa in magaalada Garawe ka dhacdo doorashada Gudoonka golaha Wakiilada Puntland iyo sidoo kale doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka maamulkaasi.
Previous articleMusharixiinta Doorashada P/land oo walaac muujiyay (Daawo)
Next articleDowlada oo Wafdi u dirtay Baydhabo iyo beesha caalamka oo walaac ka muujineeyso doorashada!!
Australia oo Soomaaliya ka saartay dalalka ay dadkooda dib u dejinta...